July 2021 - MM Daily Life
ကမ္ဘာ့ငတ်မွတ်မှု အဆိုးဆုံးကြုံနိုင်တဲ့ ၂၃ နိုင်ငံထဲ မြန်မာကိုထည့်သွင်
July 31, 2021 by MM Daily Life
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုဒဏ် ဆိုးဆိုးရွားရွားကြုံရမယ့်နိုင်ငံ ၂၃ နိုင်ငံထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေက ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ (WFP) နဲ့ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (FAO) တို့က မတ်လမှာ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ချိန်ကတည်းကဆိုရင် အခုစာရင်းထဲမှာ နောက်ထပ်ခြောက်နိုင်ငံကို ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ထဲ မြန်မာနိုင်ငံလည်း ပါလာတာပါ။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ လူသားစာနာမှုအကူအညီတွေ အလျင်အမြန် အရှိန်မြှင့်ပြီး မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် လာမယ့်လေးလအတွင်း ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုဒဏ် ပိုပြီးဆိုးရွားလာလိမ့်မယ်လို့ FAO ဂျီနီဗာရုံးအကြီးအကဲ Patrick Jacqueson ကပြောပါတယ်။ “စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်မှု ဆိုးဆိုးရွားရွားကြုံနေရတဲ့ လူအများစုကြီးအတွက် ပဋိပက္ခအခြေအနေက အဓိကအကြောင်းရင်းအဖြစ် ဆက်ရှိနေပါတယ်။ ပဋိပက္ခအခြေအနေအပြင် အနီးဆုံးဆက်စပ်နေတာကတော့ လူသားစာနာမှု အကူအညီတွေပေးဖို့ ကန့်သတ်ခံထားရတာဖြစ်ပြီး စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုကို သိသိသာသာ ပိုပြီးဆိုးရွားစေပါတယ်။ ဒီလေးလအတွင်းမှာ ဆိုးရွားတဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ ဥတုရာသီ … Read more
အမေချက်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဆန်ပြုတ်လေးကို လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာထိုင်ပြီး အားရှိအောင် ဗိုက်ဖြည့်တင်းနေတဲ့ ပရဟိတသမားတစ်ဦး
အမေချက်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဆန်ပြုတ်လေးကို လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာထိုင်ပြီး အားရှိအောင် ဗိုက်ဖြည့်တင်းနေတဲ့ ပရဟိတသမားတစ်ဦး ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းမှာ သေဆုံးသူတွေ တစ်နေ့ကို ရာချီရှိနေတာကြောင့် ပရဟိတအဖွဲ့တွေလည်း သုသာန်ကို မနားမနေ ပို့ဆောင်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးသူတွေများပြားလွန်းလို့ နာရေးကားတွေ၊Ambulance တွေတောင် မလောက်တော့တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သုသာန်တွေမှာလည်း ပရဟိတသမားတွေက Dead Body ကို မီးသင်္ဂြိုလ်နိုင်ဖို့အတွက် စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ဆိုင်းရသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Credit အမေချက်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဆန်ပြုတ်လေးကို လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာထိုင်ပြီး အားရှိအောင် ဗိုက်ဖြည့်တင်းနေတဲ့ ပရဟိတသမားတစ်ဦး ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းမှာ သေဆုံးသူတွေ တစ်နေ့ကို ရာချီရှိနေတာကြောင့် ပရဟိတအဖွဲ့တွေလည်း သုသာန်ကို မနားမနေ ပို့ဆောင်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးသူတွေများပြားလွန်းလို့ နာရေးကားတွေ၊Ambulance တွေတောင် မလောက်တော့တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သုသာန်တွေမှာလည်း ပရဟိတသမားတွေက Dead Body ကို မီးသင်္ဂြိုလ်နိုင်ဖို့အတွက် စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ဆိုင်းရသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Credit zawgyi … Read more
မုတ္သုန္ေလအားေကာင္းေနၿပီး ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ မိုးႀကီးႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ား
မိသားစုဓါတ္ပုံေလးကိုကိုင္ၿပီး ငိုေနတဲ့ ကိုရင္ေလးရဲ့ အျဖစ္
လူတိုင်းကတော့ အချိန်တန်ရင် အိုကြရသူတွေပဲမို့ ကိုယ့်ရဲ့ မိ ဘ ၊သက်ကြီး အဖိုးအဖွားတွေကို အိုမင်း မသန်စွမ်းလို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားမျိုးစုံနဲ့ ဥပေက္ခာ မပြုသင့်ပါဘူး ။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဆိုတာ ဒီလို အချိန်တွေမှာ အရမ်းကို အာ းငယ်တတ်လို့ သားသမီး ၊မြေးတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှု ၊ ကြင်နာယု ယမှုတွေကို မက်မက်မောမော တောင့်တတ်ကြပါတယ် ။ ဒီလို သက်ကြီးအဖိုးအဖွားတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးရတာလည်း ကုသိုလ်တစ်ပါးပဲ မဟုတ်လား ။ တစ်ချို့သော သူတွေကြတော့လည်း ဒီလို အဖိုးအဖွားတွေကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စွန့်ပစ်လာတာတွေ လုပ်လာတာ တွေ့ရပါတယ် ။ မနေ့ညကဆိုရင်လည်း ညကြီး အချိန်မတော် မန္တလေးမြို့ 55 လမ်း 123 လမ်းဒေါင့်မှာ အသက် (၈၀) … Read more
ဂျပန် ဖိုက်တာ ယူရှင် အိုကာမီ ဘက်ကစိန်ခေါ်ချင်းကိုပြန်လည် တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း(အပြည့်စုံဖတ်ရန် ပုံံကိုနှိပ်ကြည့်ပေးပါ) ပရိသတ်ကြီးရေ အောင်လအန်ဆန်းက ဘရာဇီးနိုင် ငံသား လီအန်ဒရိုအတေးစ် ကို အနိုင်ယူပြီးချိန်မှာ ဂျပန် ဖိုက်တာ ယူရှင် အိုကာမီက အောင်လ ကိုစိန်ခေါ် လိုက်တာကို ပရိသတ်ကြီး သိပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ် ။ ဂျပန် ဖိုက်တာ ယူရှင် အိုကာမီ စိန်ခေါ်မှုကို အောင်လ ဘက်က လက်ခံ လိုက်တာကို ပရိသတ်ကြီး အ တွက်ပြန်လည်မျှ ဝေပေး လိုက်ပါတယ် ။ “အောင်လကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ဂျပန် ဖိုက်တာ ယူရှင် အိုကာမီ”ဂျပန် ဖိုက်တာ ယူရှင် အိုကာမီ က အောင်လအန်ဆန်း နဲ့ ထိုးသတ်ဖို့စောင့် … Read more
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေအနက် အချို့ကို ဩဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့မှာ အမှုပိတ်သိမ်း ပြန်လည်လွှတ်ပေးမည့် စာရင်းတွင် ပင်းတယမီးအိမ်ရှင် ပုသိမ်ခရိုင်ဆေးရုံအုပ်ကြီး။ ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ်ပါ ပါဝင်ကြောင်း စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းတွေအရ သိရပါတယ်။ အာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်မှာ CDMလှုပ်ရှားမှု ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပြည် သူ့ဝန် ထမ်း ၂၇ဦးကို အမှုအသီးသီးကနေ ရုပ်သိမ်းပြီးတော့။ ဩဂုတ်လ ၂ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့ စိစစ်ထားတဲ့ စာရင်းမှာ ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ် ပါဝင်လာတာပါ။ ဆရာကြီးဒေါက်တာ သန်းမင်းထွဋ်နဲ့အတူ မြို့ နယ်အသီးသီးက ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ CDMလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပညာရေးဝန်ထမ်းတချို့နဲ့။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအချို့ကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့ စိစစ်စာမှာ ဖော် ပြထားပါတယ်။ ပြန်လည်လွတ်ပေးဖို့ စိစစ်ထားသူတွေထဲမှာ ပုသိမ်အကျဉ်းထောင်အတွင်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ မြန်မာသံတော်ဆင့်သတင်းဌာနက … Read more
တရုတ်နိုင်ငံက ကြောက်စရာ ရေလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ထူးခြားလှတဲ့ ကောင်းကင်မှ ရေများစုပ်ယူနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင် တရုတ်နိူင်ငံ Guangzhou တွင်ရေလွမ်းမိုးမှု့ နှင့်အတူထူးခြားဖြစ်စဉ်အတိတ်နိမိတ် ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်နေ့တွင်Guangzhou တွင် တစ်နာရီကျော်သာမိုးရွာခဲ့ပေမယ့် လမ်းအားလုးံ နီးပါးရေလွှမ်းမိုးခဲ့သည်……. မြေအောက်ဘူတာသည် ရေများဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီး (၆)ပေအထိ ရေတက်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်……. မိုးမရွှာသွန်းမည် Guangzhou Nansha တံတား အနီး၌ ကောင်းကင်မှရေများစုတ်ယူနေသည့် ထူးခြားအ့ံဖွယ်ဗွီဒီယိုကိုလည်း ဒေသခံများက ရိုက်ကူးထားကြသည်……. Credit-𝓣𝓱𝓮𝓽 𝓜𝓪𝓾𝓷𝓰 Zawgyi တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေၾကာက္စရာ ေရလႊမ္းမိုးမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ထူးျခားလွတဲ့ ေကာင္းကင္မွ ေရမ်ားစုပ္ယူေနတဲ့႐ုပ္သံဖိုင္ တ႐ုတ္ႏိူင္ငံ Guangzhou တြင္ေရလြမ္းမိုးမႈ႕ ႏွင့္အတူထူးျခားျဖစ္စဥ္အတိတ္နိမိတ္ ဇူလိုင္လ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္Guangzhou တြင္ တစ္နာရီေက်ာ္သာမိုး႐ြာခဲ့ေပမယ့္ လမ္းအားလုးံ နီးပါးေရလႊမ္းမိုးခဲ့သည္……. ေျမေအာက္ဘူတာသည္ ေရမ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး (၆)ေပအထိ ေရတက္ခဲ့သည္ဟု … Read more